Geforce Now Ray Tracing na Chrome na Cyberpunk 2077 | Gam akporosis
Emeela Geforce ugbu a ụbọchị abụọ gara aga na Chrome nke mere na site na ihe nchọgharị anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịtụnanya Ray Tracing ma ọ bụ Ray Tracing nke Cyberpunk 2007 na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ na-akwado site na ikpo okwu egwuregwu a.
Ka anyị kwuo Geforce ugbu a ga-adị ka Netflix nke egwuregwu vidiyo dị ka ikpo okwu ebe ị nwere ike ijikọ akụkọ banyere ụlọ ahịa dịka Steam, Epic Games ma ọ bụ GOG, ma si otú ahụ nwee egwuregwu ị zụrụ ma ọ bụ nke efu na elu nke eserese ahụ. Gaa maka ya.
1 Omume ọma nke Geforce ugbu a
2 Nyochaa Geforce ugbu a na Chrome na Cyberpunk 2077
Omume ọma nke Geforce ugbu a
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike imeli ka ọ bụrụ ụbọchị egwuregwu na PC na-enwe ọhụrụ egwuregwu na-na-esonyere ndozi na ndịna technology. E wezụga nke ahụ ugbu a enwere ụkọ eserese ọhụụ, dịka usoro Geforce 3000 n'ihi ngwuputa.
Nke ahụ bụ, ọbụlagodi na ego dị na obere akpa gị, ị ga-edebe akwụkwọ na ọbụna lekwasị anya n'ụbọchị iji jide Nvidia 3080 GTX; anyị na-ekwukwa banyere kaadị gafere euro 1.300. Yabụ igwu egwuregwu dika Cyberpunk 2077 zuru oke nke eserese yiri ka ọ siri ike, ewepụ ego ego.
Es Nke a bụ ebe Geforce ugbu a na-abịa n'ime play site n'ikwe ka ị na-enwe na nnọọ elu àgwà nke ndịna ya na Ray Tracing ma obu Ray Tracing site na ya free ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ na ndenye aha. Nke mbụ nwere njedebe nke otu elekere kwa ụbọchị, karịa iji nụ ụtọ egwuregwu ndị anyị zụtara, ma ọ bụ gaa na nke abụọ ugbu a ka anyị wee ghara inwe oke.
Nyochaa Geforce ugbu a na Chrome na Cyberpunk 2077
N'ezie, a ghaghi ikwu na inwe obi uto Geforce UGBU a anyị chọrọ ezigbo njikọ na ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbụ fiber optic ka mma karịa ka mma. Anyị na-eche ihu ikpo okwu na-asọba ọdịnaya, yabụ ka mma njikọ ahụ, ọ ka mma ahụmịhe ahụ. Dị ka a ga - asị na ị nwere ike ịdọrọ njikọ USB kama WiFi ...
Naanị ụbọchị ndị a Geforce UGBU a emechaala afọ 1 nke ịdị adị y maka nke a ọ na-abịa na nkwado Chrome. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ịdọrọ ihe nchọgharị Google iji malite ịmalite ahụmịhe egwuregwu gụgharia.
Nwere ike ịnweta Geforce UGBU a na Chrome site na njikọ a. Pịa na anyị ga-aga na ihe ndekọ akaụntụ iji banye ma si otú ahụ nweta ihuenyo mbụ nke ikpo okwu ebe anyị nwere ike jikọta akụkọ egwuregwu anyị nwere site na Epic Store, GOG Games na Steam.
Ekwesiri ighota na N'ime otu afọ, egwuregwu 800 dakọtara na Geforce Ugbu a abịala, gbakwunye 130 nde egwuregwu egosipụtara site na sistemụ ndekọ oge ya, yana ihe karịrị nde awa 175 na-egwu n'afọ a.
Kedu maka Cyberpunk 2077 na Geforce UGBU a site na Chrome, dị ịtụnanya ma anyị na-aguputa gị na vidiyo nke anyị bugoro na ọwa YouTube anyị nke Androidsis ka i wee hu onye mbu ihe di egwu banyere Ray Tracing ma obu Ray Tracing na CD CD a egwuregwu; na ikwu eziokwu enweela ọtụtụ nkatọ maka nsụgharị njikwa maka ọdịda na maka ịnọ n'etiti ọtụtụ n'ime nkwa ndị ahụ.
Ma Cyberpunk 2077 na Geforce UGBU A bụ nnukwu ahụmịhe egwuregwu dị ka ị pụrụ ịhụ na vidiyo anyị na-ekerịta. Otu afọ maka ikpo okwu a anyị na-agba gị ume ịnwale site na Androidsis.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » [Na vidiyo] Anyị nwalere Cyberpunk 2077's Ray Trace na Geforce UGBU a na Chrome
Realme C2 na-anabata mmelite gam akporo 10